Jowhar.com - Somali news Leader - News: Wafuud ka kala socota dowladda Soomaaliya iyo Somaliland oo ku qul qulaya dalka Turkiga
December 08 2013 01:31:01
Wafuud ka kala socota dowladda Soomaaliya iyo Somaliland oo ku qul qulaya dalka Turkiga
Wafuud ka kala socota dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland ayaa ku qul qulaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaasoo lagu wado in maalinta berri uu ka furmo wajiga labaad ee wada hadalada u dhaxeeya labada dhinac.
Sida ay sheegayaan wararka qaban qaabada shirka labada dhinac ayaa si xoogan uga socda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyadoo gudiyada labada dhinac uga qeyb galaya wada hadaladaas ay gaareen.
Kulanka horu dhaca ee labada gudi ayaa waxaa xigi doono kulan ay yeelanayaan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo.
Wasiirka Arrimaha dibada Turkiga Ahmed Dovugtulu ayaa wada hadalada labada dhinac dhex dhexaadinaya, waxaana labada dhinac wada hadaladooda noqonayaan kuwo sii socda, inta laga xalinayo caqabadaha horyaala, gaar ahaan arrinta gooni isu taaga Somaliland.
Qodobadii ka soo baxay Heshiiskii Ankara ee April ayaa dhigayay in labada dhinac ka fogaadaan wax walba oo carqalad ku keeni kara wada hadalada, iyadoo ay jireen hadalo si kulul labada dhinac qalabka warbaahinta isaga weydaarsadeen.
Sidoo kale qodobadaas ayaa ka mid ahaa in muddo 90-cisho gudahood ay kulmaan, iyadoo wajigan labaad ee wada hadalada dib loogu eegi doono wixii ka qabsoomay heshiiskii labada dhinac u kala gaareen.
Dowladda Turkiga ayaa dadaal weyn ugu jirta sidii Soomaaliya iyo Somaliland u dhameyn lahaayeen khilaafaadka u dhaxeeya, si ay horseedo in Midnimadii Soomaaliya dib u soo noqoto.
Somaliland ayaa wali ka go'an inay tahay dal madax banaan oo ka go'ay Soomaaliya inteeda kale, taasna ay tahay mid lama taabtaan ah.
mahad on July 07 2013
jowhar.com3,114,577 unique visits